Faritra Boeny: namoy ilay Ben’ny tanàna vavitokany | Région Boeny
Ao amin’ny distrikan’i Mahajanga II no misy io fari-piadidiany io. Narary efa herinandro maromaro ny tenany, ka rehefa tsy sitrana teto Mahajanga, ndia niakatra tany Antananarivo nitady fitsaboana tsaratsara kokoa, ary izao nindaosin’ny fahafatesana izao.
50 taona mahery kely Rtoa Ben’ny tanàna, manambady ary nitaiza zaza roa. Avy any Ananalava, faritra Sofia ny fihaviany.
Efa sefo fokontany tao Ampahazoany, kaomina ambanivohitr’I Belobaka nandritra ny mandà efatra ny tenany, ka rehefa nangatahin’ny antokon’ny Ampela Manao Politika hirotsaka ho Ben’ny tanàn’I Belobaka izy dia lany soa aman-tsara ny taona 2015. 46 no isan’ireo Ben’ny tanàna manerana ny faritra Boeny, ary Rtoa RAVONIARISOA Martine irery no vehivavy.
Tantsaha sady mpitarika tantsaha
Tantsaha, mpamboly sy mpiompy no tena antom-pivelomany. Ary izy no filoham-paritry ny atao hoe Coallition paysanne de Madagascar (CPM) ka fikambanana tantsaha miisa 220 eto amin’ny faritra Boeny no tarihiny. Sady nampihatra ireo fampianarana sy fanavaozana mikasika io sehatr’asa io izy no nandeha nampita fiofanana ho an’ireo tantsaha nitety ireo distrika dimy manerana ny faritra Boeny. “Matetika aho no mandeha an-tongotra andro maromaro mamonjy azy ireo” hoy izy raha nanao fandaharana manokana momba azy ny Sampandraharahan’ny Seraseran’ny Faritra, ny volana avrily 2016.
Anisany nifantohany tamin’izany asany izany ny fiompina trondro tilapia sy carpe royale nampianarin’ny tetik’asa japoney JICA teto Boeny atao hoe PATIMA (Projet d’Aquaculture de tilapia de Mahajanga), izay nampitainy tamin’ireo tantsaha anatin’ny CPM ihany koa.
Fampiharana ny Drafitra Ifotony Fanajariana ny Tany
Raha vao lany ho Ben’ny tanàna ny tenany dia niady mafy ny handrafetana sy hampiharana faran’izay haingana ny atao hoe Drafitra Ifotony Fanajariana ny Tany na Schéma d’Amenagement Communal. Boky toro-lalàna entina mikarakara sy mampandroso ny tanàna ao anatin’ny 15 taona izy io, ary anisany nofaritany tao ny fanavaozana ho moderina ny fitakiana hetra sy tamberim-bidy eny anivon’ny kaomina sy ny fanatsarana ny endriky ny biraon’ny kaomina, izay samy efa tontosany avokoa. Ary izy irery hatreto, tamin’ireo 46 ato anatin’ny faritra Boeny, no hany Ben’ny tanàna sahy nampiakatra ny karaman’ny mpiara-miasa aminy sady nahavita nanefa izany tsy tapaka sy tsy misy vary mangatsiaka mihitsy araka ny tatitra nataony faha-velony.